T5577 ဟိုတယ် Keychain, T5577 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, T5557 ဟိုတယ် Key ကို Ring ကို, T5567 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Key ကို Fobs
Keychain ATA5557 Access Control Keychain, ATA5567 Keychain, ATA5577 Access Control Keychain, T5557 ဟိုတယ် Key ကို Ring ကို, T5557 Hotel Keychain, T5567 Hotel Key Fobs, T5567 Hotel Keychain, T5577 Access Control Key Fobs, T5577 Access Control Key Ring, T5577 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, T5577 Chip Keychain, T5577 Hotel Key Fobs, T5577 Hotel Key Ring, T5577 ဟိုတယ် Keychain
IC chip ကို: Atmel T5577
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: 330 -bits
အရောင်ရွေးချယ်မှုများ: ဝါသော, ပြာသော, အနီေရာင်,စသည်တို့ကို.
ပစ္စည်း: ကို ABS shell ကို, Ultrasonic ပလတ်စတစ်ဂဟေဆော်ခြင်း
T5577 chip is the Atmel company produces the multi-function non-contact R/W identification integrated circuit, LF 125KHz ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးလျှောက်ထား.
T5577 chip ကိုထူးခြားတဲ့နှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသော encryption ကို performance ကို (multilevel ခွင့်ပြုချက်), ဒါကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ဟိုတယ်တံခါးကိုသော့ခလောက်အသုံးပြုသည်, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝိသေသလက္ခဏာ.
T5577 Chip Keychain can be used in access control applications such as hotel, ဆေးရုံများ, shared homes, shops, and government offices. Inside the sealed RFID chip, the T5577 RFID keychain enables the application of automatic check-in/out procedure access control while capturing real-time information.
ထိုကွောငျ့, RFID keychains areasafe and good way to limit access rights. RFID keychains can be selected in different styles and colors, as well as custom pattern or LOGO printing and serial number printing.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, hotel smart door locks, water meters, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, access systems, dining hall charge cards, parking lots, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product T5577 Hotel Keychain, T5577 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, T5557 ဟိုတယ် Key ကို Ring ကို, T5567 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Key ကို Fobs
prev: RFID Crystal Epoxy Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, RFID Crystal Epoxy စမတ်လက်စွပ်
UID Key ကို Chain, UID Access Control ရေးသားနိုင်သော Key Chain,0ကဏ္ဍက Can ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး UID Key ကိုလက်စွပ်
PU ပစ္စည်း RFID key ကိုကွင်းဆက်, PU ပစ္စည်းလက်လှမ်းမီထိန်းချုပ်ရေး KeyCain, PU ပစ္စည်း NFC Key ကိုကွင်းဆက်, PU ပစ္စည်း RFID Key ကိုလက်စွပ်
RFID Card ကို (151)
ဆက်သွယ်ပါ Chip ကဒ် (7)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (88)
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို (6)